आन्दोलनमा कतैबाट साथ नपाएपछि प्रचण्ड–माधव निराश, जनता नारायणकाजीको पछि लाग्लान् ? - || वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक ||
आन्दोलनमा कतैबाट साथ नपाएपछि प्रचण्ड–माधव निराश, जनता नारायणकाजीको पछि लाग्लान् ?
२०७७ पुष १९, आईतवार ०८:३६:००
विभाजित नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले कतैबाट साथ नपाएपछि अहिले निराश अवस्थामा पुगेका छन् । आफ्नो निजी स्वार्थका निम्ति पार्टी फुटाएको, देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेलेको र जनताका समस्यामा कहिल्यै नबोलेकाहरु अहिले सडकमा आएर नाटक देखाएको भन्दै दाहाल–नेपालप्रति जनस्तरमा व्यापक आक्रोश छ । सामाजिक सञ्जालमा पनि यी अतृप्त आत्माहरुको अब सती जान नसकिने, बरु आन्दोलनका नाममा सडकमा जाम गरे ढुंगा हानेर लखेट्नेसम्मका टिप्पणी भाइरल भइरहेका छन् । भर्खरका स्कुले नानीहरु समेत आन्दोलनका नाममा गुहार माग्दा लाज लाग्नुपर्ने भन्दै टिकटक भिडियो बनाइरहेका छन् ।
कतैबाट साथ नपाएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम नै सार्वजनिक गर्न बोलाएको पत्रकार सम्मेलन नै स्थगित गर्नुपरेको थियो । आगामी रणनीति तय गर्न बोलाइएको स्थायी समिति बैठक समेत तीन दिनदेखि बस्न सकिरहेको छैन । पूर्वमाओवादी खेमाका ९० प्रतिशत नेता कार्यकर्ता प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीतिर लागेपछि प्रचण्ड झनै संकटमा परेका छन् । माधव नेपालका कार्यकर्ता कति दिनसम्म बोक्लान् र आफ्नो राजनीति जोगिएला भन्ने चिन्तामा प्रचण्ड डुबेका छन् ।
केही दिनयता दाहाल खेमाका राजनीतिक गतिविधि ठप्पप्रायः छन् । नेताहरुले जनता र कार्यकर्तासामु मुख देखाउन सकिरहेका छैनन् । ओलीविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गर्ने भनेको यस खेमाले प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको साथ खोज्दा पनि पाएन । यही कारण संयुक्त आन्दोलन घोषणा गर्ने प्रयास पनि सम्भव भएन । यसले के देखाउँछ भने पार्टीभित्रबाट मात्र होइन, प्रचण्ड र माधव नेपाल राष्ट्रिय राजनीतिबाट पनि एक्लिँदै गएका छन् ।
चीनले एक विशेष टोली नै पठाएर मुलुकलाई अस्थिरतातिर धकेल्ने कुनै पनि प्रयासमा साथ दिन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । यहाँको अस्थिरताले आफ्नो मुलुकमा पनि असर पार्ने भन्दै चिनियाँ अधिकारीहरुले सचेत गराएका छन् । नेपाली जनताको खुसी र समृद्धिमा साथ दिने तर टुटफुटको राजनीतिमा कहिल्यै पनि साथ दिन नसक्ने चिनियाँ पक्षको स्पष्टोक्ति छ । ओलीविरुद्ध चुक्ली लगाउन पुगेका दाहाल–नेपाल खेमाका नेताहरु त्यसयता हिस्स परेका छन् ।
भारत, अमेरिका, युरोप लगायतबाट आफ्नो आन्दोलनम समर्थन हुनुपर्ने भन्दै प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमै गुहार मागेका छन् । तर अहिलेसम्म नेपाली जनताको भावनाविपरीत सार्वजनिक रुपमै दाहाललाई समर्थन गर्न कुनै अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति देखापरेको छैन । यसअघि पार्टी फुटाउन र ओलीविरुद्ध उचाल्न भूमिका खेल्ने एजेन्सीहरुले पनि पर्याप्त साथ नदिएको बुझिन्छ । ती एजेन्सीले पनि प्रचण्ड र माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री ओलीले यसरी सडकमा पुर्याइदेलान् भन्ने अनुमान गर्नै नभ्याएको देखिन्छ ।
दाहाल र नेपालले मुख देखाउन नसक्ने भएपछि यस खेमाको तर्फबाट आन्दोलनको नेतृत्व नारायणकाजी श्रेष्ठले गर्ने भएका छन् । हालसालै कमानसिंह लामाको करिब ८ करोड रुपैयाँ ठगी प्रकरणमा मुछिएर मुख देखाउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेका श्रेष्ठले आन्दोलन कसरी हाँक्लान् रु बडो चासोको विषय बनेको छ । सरकारले पारदर्शी रुपमा दिएको तलब नखाने, अरु पारदर्शी आम्दानी पनि नभएका तर राजा–महाराजाको जस्तो ऐयासी जीवन बिताइरहेका श्रेष्ठलाई चिन्नेहरुले ढोँग र पाखण्डको प्रतीक मान्छन् ।
विगतमा कुनै लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अनुहार नदेखाएका उनले जनआन्दोलन सफल भएपछि प्रचण्डको चाकडी बजाएर र बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द लगायत होनहार क्रान्तिकारी नेताहरुविरुद्ध चुक्ली लगाएकै भरमा माओवादीको दोस्रो वरीयता पाएका थिए । संगठनका नाममा गिरिराजमणि पोखरेल बाहेक अर्को कार्यकर्ता नभएका नारायणकाजीले अब आन्दोलनमा कसरी मान्छे जुटाउँछन् रु जनताले ढुंगामुढा गरे कसरी सामना गर्छन् रु प्रचण्ड र माधव नेपालले कुर्सी र सोफा नपाउँदा पार्टी फुटाएको कुराको कसरी औचित्य पुष्टि गर्छन् रु प्रतीक्षाकै विषय बनेको छ ।